Siyaasi shaaciyay Sababta keentay Rabshadii ka dhacday Garoonka Aadan Cadde | Allbanaadir.com
Home NEWS Siyaasi shaaciyay Sababta keentay Rabshadii ka dhacday Garoonka Aadan Cadde
Siyaasi shaaciyay Sababta keentay Rabshadii ka dhacday Garoonka Aadan Cadde
Waxaa saakay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho gaar ahaan qeybta dadka ka soo dega diyaaradaha caalamiga ka dhacay rabshado gacan ka hadal ah oo dhax maray ciidamo katirsan NISA iyo shaqaalaha Hay’adad socdaalka iyo jinsiyadaha.
Rabshadahan ka dhacay gudaha garoonka ayaa muuqaalo laga soo duubay muujinayaan labada dhinac oo gacmaha iskula tagay iskuna tuuraya kuraas iyo agabyo kale, waxaana bur bur soo gaaray miyaaradaha miiska laga hubiyo dadka soo dega iyo kuwa baxaya.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in ciidamo katirsan NISA weerareen shaqaalaha hay’adad socdaalka iyo jinsiyadaha qeybta ku sugan goobta lagu hubiyo dadka dibada ka yimaada ama u dhoofaya.
Waxa uu sheegay sababta ciidamada NISA u weerareen garoonka Aadan Cadde in ay tahay in loo diiday in rag ajnabi ah oo u socday Hay’adda NISA in gudaha u galaan magaalada Muqdisho kadib markii ay garoonka kasoo degeen.
”Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa maanta dharcad hubeysan oo ka tirsan nabadsugidda waxey qabsadeen qeybta soo degista (Arrival) ee waaxda socdaalka (Immigration). Waxey bistoolado ku garaceen shaqaalihii, waxey jejebiyeen qalabkii lagu shaqeynayey, waxey argagax ku rideen dad weynihii, Sababta ay sidaas u yeelayaana waa in la diiday rag ajnabi ah oo NISA u socday in ay gudaha dalka soo galaan. Bahdilaad iyo awood sheegasho ayey muujiyeen ciidanka NISA.” ayuu yiri C/raxmana C/shakuur.
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in xarumaha dowlada mudooyinkan uu ku faafayo Dhaqanka fowdada, isku itaal sheegashada, waxa uuna arimaha sabab uga dhigay in dowlada hada jirta uusan hogaankeeda aheyn mid sharciyad ku jooga.
Previous articleMadaxweyne Joe Biden oo la filayo inuu qaado tallaabo ka carreysiin doonta Turkiga
Next articleWariye Caan ah oo loo magacaabay Gudoomiyaha Degmada Xamar Jabab